Ceros: Gadzira Yakanaka Inopindirana Zvemukati pasina Kubudirira | Martech Zone
Ceros: Gadzira Yakanaka Inopindirana Zvemukati pasina Kubudirira
China, Kukadzi 26, 2015 Douglas Karr
Zvakanyanya seWordPress muridzi wemukati manejimendi sisitimu yemusika, ichiri kuda chivakwa chakasimba, chengetedzo inoenderera, uye timu hombe yekusimudzira kuvaka dingindira kana plugin inoita kuti ikushandire. Ini handisi kuyedza kudzikisira pasi zvinoshamisa kushanduka, asi iwo mukana webhizimusi mushandisi kusaina uye kuvaka yakanaka webhusaiti iri kuzotora rimwe basa.
Zvakare, iyo paradigm yewebhusaiti iyo inoumbwa nemenyu, bhurocha, uye blog iri kutanga kuchinja sekutaura nyaya uye zvemultimedia zvemukati zvinotyaira kumwe kubatanidzwa. Chirimwa chitsva chemasaiti esiti chiri kubuda chinopa nzira yekufamba mushanyi kuburikidza nenyaya uye kuita shanduko kwete tambo yakaoma iyo mushandisi anofanirwa kuvhima nekutsemura kuti awane chaanoda.
Ceros iri dhijitari katarogu uye zvemukati manejimendi sisitimu inotarisira kuita izvi chete. Nekudhonza uye kudonhedza, inoteerera interface uye ecommerce kusanganisa kunze kwebhokisi, iyo inopa isingagutsikane zvemukati papuratifomu iyo mushambadzi anogona kutarisa pane meseji kupfuura kurwisa tekinoroji.
Heano mamwe epakati, akasarudzika maficha eCeros:
Yakazara Bhurawuza uye Cloud yakavakirwa ine chaiyo-nguva yekutarisa uye yekugadzirisa pamwe neicho chaicho-nguva kubatana pakati pevashandisi.
Yakavakirwa-mukati analytics iyo inosanganisira zvese zvekutanga analytics nzira yese kudzika kune granular kubatanidzwa KPIs.
Dhijitari-Kutanga HTML5 chikuva - yekutanga uye yega digital-kutanga chikwiriro
Dhonza uye udonhedze interface.
Ecommerce kusangana - Dhonza zvigadzirwa mapaneru uye yekutengera ngoro ine izere mashandiro pasina budiriro.
Mudziyo uye chiteshi agnostic - Gadzira chiitiko chimwe uye chinoenderana nechero saizi yechiso uye chinoshandira chero zvimiro zve iframe.
Heano wakanaka muenzaniso weiyo tekinoroji neNhaucred, iyo Simba rekuona Nhaurwa.
Tarisa uone imwe yeimwe mienzaniso mikuru yeinopindirana infographics, microsites uye nzvimbo dzekutaura nyaya dzakavakirwa paCeros. Ipuratifomu yakanyatsogadziriswa ine kuwedzera huwandu hwevatengi vakuru.
Tags: zeroszvinowirirana zvemukatiInopindirana infographicsnhauStorytellingnyaya yekutaura masendimita
Webtrends Inotangisa Big Data Kuonekwa neWebtrends Ongorora
Maitiro Ekugadzirisa 4 Mobile Kushambadzira Zvikanganiso Zvauri Kuita